Malaayiin Afrikaan ah oo taageerenimada kala noqonaya Manchester City iyagoo ka xun sidii Guardiola uu ula dhaqmay Yaya Toure – Gool FM
Malaayiin Afrikaan ah oo taageerenimada kala noqonaya Manchester City iyagoo ka xun sidii Guardiola uu ula dhaqmay Yaya Toure
(Manchester), 05 September 2016 –Kooxda Kubadda Cagta Manchester City ayaa Malaayiin taageeerayaasheeda Afrikaanka ah ay kalsoonida kala noqon doonaan haddii ay dhacdo in xidigga ay eegtaan ee Yaya Toure uu ka tago kooxdaasi dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Sida uu ku warramayo Wargeyska ‘Daily Mail’ ee Ingiriiska Wakiilka Yaya Toure, Dimitri Seluk ayaa jariidaddan u sheegay in Manchester City ay lumin doonto Malaayiin taageerayaasheeda Qaaradda Afrika ah oo ka xun sida uu tababaraha naadigaasi Pep Guardiola ula dhaqmay Yaya Toure, waxaana dhici karta in taageerayaashaasi ay raadsadaan koox kale oo ay u sacab tumaan.
“Waxay lumin doonaan Malaayiin taageerayaal Afrikaan ah sababo la xiriira go’aankii uu qaatay Guardiola awgeed” sidaa waxaa Wakiika Yaya Toure uu u sheegay warbaahinta Ingiriiska.
“Waxa uu helayaa codsiyo fara badan oo kaga imaanaya, Ingiriiska, Yurub, Shiinaha iyo Mareykanka waayo dhammaan kooxuhu waxay doonayaan inay helaan Yaya, waxa uu marayaa heer wanaagsan, xaaladdiisuna aad bay u fiican tahay oo waayo hadda 7 kiilo ayaa miisaankiisa ka degtay” ayuu sii raaciyay Seluk.
“Waa inaan sugnaa saddex bil illaa laga gaarayo Janaayo, dhib ma lahan, Yaya waa xiddig professional ah” ayuu sii raaciyay Wakiilku.
“Waxay ila tahay intaasi oo keliya kuma filna Guardiola, waayo xitaa Zlatan Ibrahimovic kuma filnayn (oo uu ula jeedo markii uu ka diray Barcelona)”.
Paul Pogba oo daaha ka rogay kabaha cusub uu sabtida kala hor-tagi doono Man City +SAWIRRO